Andargaachaw Tsige har'a gadhiifame - BBC News Afaan Oromoo
Andargaachaw Tsige har'a gadhiifame
Obbo Andaargaachaw Tsigee har'a gadhiifamu jedhamee eegamaa jira Obbo Andaargaachaw Tsige miseensi dhaabbata Ginboot 7 fi bakka hinjirreetti yakka shororkeessummaatiin himatamee waggoota afuriif hidhaarra ture har'a Kibxata sa'aa booda gadhiifame.
Obbo Andaargaachaw ummata isaa simachuu achitti eegaa tureef taasisaniin, ''Ani hiikameera Itoophiyaa garuu rakkoowwan hinhiikamiin baayyee qabdi,'' jedhaniiru.
Erga mana gahaniis wanti argan kan hinyaadamne itti ta'usaa kan dubbatan Obbo Andaargaachoon, ''ragaa omaa qabaachuu baadhulleen lammiilee ana hiksiisuuf yaalii taasisaa akka turan natti dhagahama ture,'' jedhaniiru.
Namoota guyyaa akkasii akka dhugoomuuf haarsaa kanfalan hundaaf galata erga dhiyeessaniin boodas, ''haala rakkisaa ummanni biyyattii keessatti argamaniin yoo wal bira ilaalamu, haala akkasii arguurra du'aa motummaan keessan murteesse sana hojiirra olachaa jechuun qorattota isaanii gaafachu himaniiru.
Kana malees, ''ganadhiisaa jedhee isiin hingaafadhu garuu olmaan isiin waliin hojachuun olee naaf lakkaa'uun murtee du'aa hojiirra olchaa jechuun gaafadheeras,'' jedhaniiru.
Akkasumas 'abbaa kiyya osoon hinargiin kanan isiinitti dubbadheef waanan isiin kabajuufiidha'' jedhaniiru.
dabalatee namoota 500 oliif kan haala addaatiin dhiifamni taasifameefi kan himannaan isaanii adda cite gadhi akka lakkifaman erga Sanbata darbee motummaadhaan ifa taasifameen booda har'a sa'aa booda gadhiifamaniiru.
Deegartoonni isaa erga guyyaa gadhiifamuu jedhamee kaasuun karaa ilaalaa turanis, daandii dhiphisuun miiraan simachuun isaanii barame.
Akka maddeen himanittis, deegartoonnis mana maatii obbo Andaargaachaw kan magaalaa Finfinnee naanawa Booleetti argamutti walgahuun dheechisaafi geeraraa eegaa tura.
Obbo Andaargaachaw Tsigee har'a gadhiifamu jedhamee eegamaa jira